पूर्ण-आकृति क्रमबद्ध गर्ने के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Vollarmortisation
पूर्ण-आर्म छान्नु भनेको के हो?
यदि तपाईं पट्टे अनुबंधको रूपमा वित्तपोषणमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई केही विशेष टेक्निक सर्तहरू पनि परिचित हुनेछ। तपाईंले पहिले नै यस्तो अनुबंध पूरा गरेको हुन सक्छ र यदि तपाइँले पट्टे पट्टे पूर्णरुपमा तिर्नुभएको छ र पट्टे भएको वाहन तपाईंको स्वामित्वमा पुग्छ, त्यस सम्बन्धी शब्द Vollamortisation हो। तर यो केवल पट्टि भुक्तानी छैन जुन छुट्याउन सकिन्छ, तर पूर्ण खरिद मूल्य यी पट्टे किस्तहरू मार्फत भेटिन्छ। तपाईं स्वामित्व प्राप्त गर्न दरहरू अनुसार उच्च हुनुहुन्छ र यद्यपि यो प्रकारको वित्त पोषण आम हो, अधिकांश अवस्थामा मात्र आंशिक परिशोधन सहमत छ।
एक निजी पट्टा मार्फत वित्त पोषण
पट्टि आज क्लासिक फाइनान्सिंगको एक विकल्प हो। जब सम्पत्ति पट्टि सुरुमा कमरसँग रहन्छ। तथापि, उपभोक्ता क्रेडिट र उपभोक्ता क्रेडिट मा कम ब्याज दर संग, निजी पट्टा एक विशेष प्रकार को वित्त पोषण को रूप मा कम आर्थिक रूप देखि व्यवहार्य छ। पट्टि सधैं वित्त पोषण को एक विशेष तरीका हो, किनकि यहाँ कर योग्य पहल अनुबंध को लागि महत्वपूर्ण हो। पट्टे दरहरू, केहि परिस्थितिहरू अन्तर्गत, कर उद्देश्यका लागि लिइन्छ, उदाहरणका लागि यदि तपाईं एक व्यापारी हुनुहुन्छ र तपाईले वाहन वा चीजको वित्तपोषण गर्नुहुन्छ। आंशिक संशोधनमा, पट्टे को सामान्य रूप, कमोडिटी को स्वामित्व को एक निश्चित अनुपात स्थानांतरित छ। यहाँ, सम्झौता अनुबंधको अन्त्यमा, प्राय: कमरको सम्पत्तिमा चीजको स्थानान्तरण हो, वा प्रश्नले ट्रिगर गर्दछ र मालिक बन्छ। तपाईं अझै पनि यस प्रकारको सस्ते प्रस्तावहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तर सामान्य कार ऋण वा उपभोक्ता ऋण धेरै सस्तो छ कि एक निजी पट्टिमा सानो आर्थिक प्रभाव छ। तपाईं ग्राहकको रूपमा सामान्यतया फरक देख्न सक्नुहुन्न। तपाईं पूर्ण संशोधन दर संग प्रस्तुत र वास्तव मा केवल किन्न वा चीज किन्न चाहान्छ।
पूर्ण परिशोधन पट्टे को एक स्पष्ट अवधारणा हो
चाहे तपाईं पट्टे वा किन्डिङ क्रेडिटको लागि छनौट गर्नुहुने सँधै तपाईंको आफ्नै क्रेडिट मूल्याङ्कनको प्रश्न वा आर्थिक औचित्य हो। पट्टि अन्तिम भुक्तानी किन्नको रूपमा पूर्ण परिशोधन शब्द को जान्छ। यहाँ, पट्टाको अन्त्यमा, वास्तवमा एक किन्टर भाडामा, अन्तिम रकम मात्र भुक्तानी गरिन्छ र खरिद मूल्य पुग्यो। जबसम्म ब्याज दर किन्ती ऋण को लागी धेरै उच्च दर मा पर्यो, पट्टे स्वयं को वित्तपोषण को लोकप्रिय रूप थिए। तपाई अब जान्न चाहानुहुन्छ कि कुन प्रकारको परिशोधन यो अझै पनि अवस्थित छ। शब्द उत्परिवर्तन पहिले देखि नै परिचित हुन सक्छ, र त्यहाँ सधैँ एक शब्द संग सम्बन्धित लग रहेको छ। पूर्ण संशोधनको अवस्थामा, एक आर्थिक ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सकिन्छ र पूर्ण अनुमोदन अन्तिम किस्तमा यो ब्यालेन्स प्राप्त गर्दछ, जुन पट्टिको शुरुवातमा सहमत हुनु पर्दछ। निस्सन्देह, सामान्य पट्टि सम्झौताको पनि अन्तिम किस्तहरू थाहा छ र पूर्ण परिशोधन लागू गर्दछ, त्यसपछि पट्टाको अन्तिम किस्तलाई मेटाउँछ र एक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने समापन दरद्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ। प्रश्नहरू पूर्ण परिशोधनको सम्बन्धमा उत्पन्न हुन्छन्, उदाहरणका लागि - पट्टि पनि पट्टिको कुरा हो - तपाईले अन्तिम किस्तको रूपमा भुक्तानी गर्नुहुन्छ। पूर्ण परिशोधन कसरी आर्थिक रूपमा हो र सम्पत्ति साँच्चै पट्टेको सम्पत्ति हुनुपर्दछ। पूर्ण परिशोधन चयन गर्ने फाइदा सम्बन्धित गणनामा देख्न सकिन्छ। तपाइँ अन्तिम किस्तमा बचत गर्न आवश्यक छैन त्यसैले तपाइँ साँच्चै अन्त मा अन्तिम किस्त भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण संशोधनको साथ तपाईंले वृद्धि दरहरू तिर्नु भएको छ, जुन यो पहिले नै पट्टेको साथ समावेश गर्दछ। पूर्ण परिशोधनको गणना र पट्टे, अधिग्रहण, निर्माण र प्रशासनिक लागतहरूको सम्बन्धित दर गणनामा समावेश छन्। कुनै पनि अवस्थामा, कमर पूर्ण परिशोधन को घटना मा एक राम्रो सौदा बनाउँछ।
अर्को लेखBagatell क्रेडिट